SIDEE LOO XAFIDAA ISTEROBERI GURIGA GURIGA? - WIXII MARTIDA
Dayrtu waxay ahayd mid bacrin ah oo la soo bandhigay goosashada hodan ah oo isteroberi ah? Diyaargarowga lagama maarmaanka ah ee qaabka miraha la qalajiyey ee isteroberi iyo miraha la qalajiyey ayaa mar hore la sameeyay, laakiin weli ma jiraan miro badan?
Miyaa macquul ah in guriga lagu hayo midho cusub? Maxay tahay iyo sida loo xafiddo isjugsiyada? Muddo intee dhan ah? Oo ma jiri doonaa wax faa'iido u leh? Jawaabaha su'aalahan waa halkan.
Pear - mid ka mid ah digaagga ugu faa'iido badan. Iyadoo wax yar calorie yar iyo isteroberi sonkorta sonkorta waxay leeyihiin saamiyo weyn. nafaqooyinka iyo fitamiinada. Midhaha Tani waxay ka badan tahay macaanka vitamin C xataa xitaa madow.
Nooc folic acid ah oo laga helo pear ayaa aad u caawin karta haweenka uurka leh iyo carruurta yaryar. Waxyaalaha potassium ee miro badani waa mid aad u sarreeya, sidaas darteed midhaha pear waxay leedahay saameyn faa'iido leh shaqada murqaha wadnaha.
Cun labo pears cusub on calool madhan waxay yareyn doontaa laf dhabarta iyo baabi'iyo raaxo xiidmaha. Taasi waa sababta isticmaalka miro cusub oo aad u muhiim ah. Sidee loo xafidaa?
Waxaa laga yaabaa in xaaladda ugu weyn ee kaydinta muddada dheer ee isteroberi ay yihiin xulashada taxaddar leh.
Inta ugu badan si fiican u qabatay Xilliga Dayrta (Forest Beauty, Georges Boucher, Asal, Macmacaan iyo kuwo kale) iyo noocyada jiilaalka ee isteroberi (Saratovka, Kondratievka, Pass-Krassan, Bere Ardanpon, Cure (William Winter) iyo kuwo kale).
Isteroberi ayaa lagula talinayaa in laga saaro geedkii, in ka badan qashin, maxaa yeelay inta lagu jiro kaydinta waxay yeelan doonaan wakhti ay ku rusheeyaan. Thanks to this subtlety this, si weyn u yareeyo duufaan iyo boodhka miro.
Qodobka labaad ee la raaco bixin taxaddar - Tani waa muuqaalka miraha. Waa inay noqdaan kuwo aan calaamado lahayn buuq, guud, qalalan, adag, oo aan lahayn astaamaha cudurka, iyada oo aan lahayn cillado kala duwan. Xaqiiji jiritaanka jiritaanka.
Qodobka saddexaad wuxuu si toos ah ula xiriiraa ururinta pear. Cimiladu waa inay noqotaa mid dhan qalalan. Haddii dhaxan ay bilaabanto oo heerkulku hoos u dhaco habeenkii -15 ° C, markaa miraha waxay noqdaan mid aan ku haboonayn kaydinta cusub.
Miraha waxay u baahan tahay in si sax ah looga saaro, adigoon adigu riixin. Waxaa lagama maarmaan ah in la jiido pear leh gacanta, cadaadi on jirida, iyo, wax yar ka qaad, ka kala leexda.
Sidee loo xafidaa isteroberi xilliga jiilaalka?
Fikrad gaar ah waa in la siiyaa weelka aad ku kaydsanaysid goosashada. Doorashada ugu fiican waxay noqon laheyd nadiifi sanduuqa alwaax, laakiin maqnaanshaha, waxaad isticmaali kartaa sanduuqyada bacaha leh grooves ama dambiilo.
Sanduuqa waa inuu lahaadaa godadka gelitaanka hawada, haddii xaaladdan la dayaco, ka dib rotting pears waa lama huraan. Qeybta hoose iyo dhinacyada weelka waxaa lagu daboolaa warqad. Kiimikadu waxay ku fidisaa jirridda ilaa iyo dhinac, si aysan isu taaban midba midka kale.
Hal sanduuq oo isdabajooga halbeegga. Waxaa lagama maarmaan ah in la saaro isteroberi sanduuqyada lakabyada, mid kasta oo loo baahan yahay warqad ka bax, xiirto ama caws engegan. Ha ku faafin midhaha ka badan laba lakab.
Beeralayda qaarkood waxay xayiraan mirahaas iyagoon lahayn sanduuqyo rush khaas ah. On khaanadaha, daboolay warqad, isteroberi ah ayaa la dhigay in hal lakab ah asliga ah.
Xagee iyo sidee loo ilaalin karaa isugeynta guriga? Meelaha kaydinta miraha midkoodna maahan mid aad u badan.
Cagaarka ama qolka hoose waa inay noqotaa jeermiska. Daaweynta jeermisyada, waxaad isticmaali kartaa talada ku saabsan qolka fuigantiga uumiga leh.
Si arrintan loo sameeyo, ku rid jalbadaha maqaarka leh dhuxul kulul iyo budada sulfur. Albaabadu si adag u xiran yihiin iyo 2-3 maalmood ka dib qolka si gebi ahaanba loo nadiifiyo.
Waa in aysan jirin wax raad ah darbiga. xagta iyo fangaska. Waxaa lagama maarmaan ah in lala socdo fulinta heerkulka iyo qoyaanka. Kiimiko waa in aan lagu kaydin meel u dhow khudaarta kale.
Qol qaas ah oo loogu talagalay keydinta miro: waxay noqon kartaa qol kaydin, godad ama wax kasta qolka aan kuleylka lahayn. Xaaladaha kaydinta waxay la mid yihiin: heerkulka hooseeya, qoyaan aan ka yarayn 85%, hawo wanaagsan iyo la'aanta iftiin. Haddii xaaladda dambe ay adagtahay in la buuxiyo, sanduuqyada leh isteroberi waxaa lagu daboolayaa maro madoow ah oo si fiican u gudubta hawada.
Loo baahan yahay si taxadar leh u fiirso xaaladda miro. Si ka duwan sida tufaaxa, isteroberi waxaa lagu kaydiyaa ma si fiican iyo waqti dheer.
Midhaha halbowlaha ah ayaa khasaari kara dalagga oo idil. Wakhti ahaan waxay ubaahan tahay inay kormeeraan isteroberi, cayayaanka la jarjaray iyo midho la jarjaray. tirtir isla markiiba.
Haddii aadan haysan kartid inaad ku xafiddo isteroberi maqaarka, ka dibna isku day inaad sameyso gurigaaga.
Guryaha magaalooyinka ee ilaalinta isteroberi cusub, waxaad isticmaali kartaa balakoon. Xaaladda ugu weyn waa maqnaashaha heerkulka liidata. Laba bilood ilaa saddex bilood, waxaa suurtogal ah in la keydiyo miraha.
Xaaladaha kaydinta: sanduuqa ama weel kasta oo dabaysha leh. Isteroberi ayaa lagu dhigay layers. Lakabyada ayaa lagu shubay caws ama ciid nadiif ah. Haddii ay dhibaato tahay in la helo qalabkaan ku yaal goob magaalo ah, qaabka soo socda ayaa loo isticmaali karaa.
Pear kasta oo si taxadar leh ku duuban warqad khafiif ah. Waa lagama maarmaan in la isticmaalo wargeyska, sababtoo ah daabacaadda naqshaduhu ma ahan jawi deegaanka ah. Nudaha ama waraaqaha xajinta ayaa sameyn doona. Ku rid sanduuqa hal ama laba lakab. Ha ilaawin inaad si joogto ah u hubiso joogitaanka miraha la jaray.
Maqnaanshaha dhammaan goobaha kaydinta ee kor ku xusan, waxaad badbaadin kartaa qadar yar oo isteroberi cusub ah qaboojiyaha.
Cayayaanka oo adag, adag ah oo isdabajooga leh oo lagu duubay 0.5 kg bac ah. Samee boomaato yaryar ee xirmada hawo qaadashada hawada.
Mar walba si joogto ah u hubso. Calaamadaha ugu yar ee dhaawaca waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho xirmada oo dhan.
Sidee loo ilaaliyaa isteroberi muddo dheer? Shuruudaha kaydka caadiga ah ee isteroberi ee guriga:
Ilaalinta muddada-dheer ee dalagga, waa lagama maarmaan in si adag loo ilaaliyo u hoggaansamida heerkulka iyo qoyaanka ee kaydinta. Haddii cayayaanka lagu keydiyo balakoonka, markaa heerkulka heerkulka waa ilaa -1C, taas oo ah ilaa, ilaa heerkulka liita.
Marka lagu kaydiyo qaboojiyaha, heerkulka loo baahan yahay ayaa la dejiyaa gudaha laga bilaabo +1 ilaa +5 digrii Celsius Marka lagu kaydiyo qolal gaar ah iyo xaaladaha maqaasi waa sidan soo socota:
Heerkulka wuxuu ka bilaabmaa -1 ilaa 0 ° C.
Qoyaan ka yimaad 85 ilaa 90%.
At qoyaan iyo heerkulka sare, isteroberi bilaabi doonaa shumaca iyo kallana. Marka heerkulka hooseeyo iyo qoyaanka yar, miraha ayaa bilaabi doona qalaji iyo lumiyaan muuqaalkooda iyo casiirkooda.
Nasiib darro, xitaa iyada oo dhammaan hababka loo hoggaansamayo nidaamka, wakhtiga kaydinta for pears ma aha mid aad u ballaaran. Isku celcelinta nolosha shafka miro leh kaydinta saxda ah laga bilaabo 2 ilaa 4 bilood. Under xaaladaha ku habboon, noocyo xilliga qaboobaha waxaa la badbaadin karaa ilaa April, iyaga oo iyaga oo leh oo casiir leh oo caafimaad qaba.
Laakiin halkan waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo arrimo badan oo kala duwan: nooca miro, heerka bislaanshaha midhaha goosashada, heerkulka kaydinta, qoyaanka qolka. In qaboojiyaha ilaalinta miraha cusub waa mid aad u yar: illaa hal bil.
Inkasta oo ay jirto xaqiiqda ah in is-qabashada isbiirsaday cusub muddo dheer waa mid aad u adag, iyada oo la raacayo dhammaan sharciyada kor ku xusan, tan waa suurtagal.
Kufsigu waxay haysaa dhadhanka iyo tayada waxtarka leh xitaa ka dib kaydinta dheeraadka ah. Sababtan awgeed, dhammaan hawlaha adag ee lagu ilaalinayo gooyaan.
Intaa waxaa dheer, haddii aad tahay milkiilaha sanadle ah oo goos goos ah oo isteroberi ah, waxaad fursad u leedahay dhammaadka jiilaalka si aad u kasbato qaddar mug leh.
Sababta oo ah isteroberi ayaa had iyo jeer lagu iibiyaa aad u wanaagsan oo yihiin miro jecel Dad badan.